राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा १३ संवैधानिक आयोगमध्ये ११ वटामा ४० पद रिक्त – HostKhabar ::
राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा १३ संवैधानिक आयोगमध्ये ११ वटामा ४० पद रिक्त
अन्नपूर्णपोष्ट काठमाडौं : राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा १३ संवैधानिक आयोगमध्ये ११ वटामा ४० पद रिक्त रहेका छन् । सत्ताधारी दल नेकपाको आन्तरिक रडाको र प्रतिपक्षीदलहरु समेतको दावी रहेका संवैधानिक निकायका पदहरु खाली हुँदा समस्या श्रृजना भएको छ ।
० अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात २०७४ माघ २९ गते अवकाश भए। घुस खाएको आरोप लागेपछि अर्का आयुक्त राजनारायण पाठकले २०७५ फागुन ३ मा राजीनामा दिए । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विवाद मिलाइदिने भन्दै ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप पाठकलाई लागेको छ।
बस्न्यातविरुद्ध ललिता निवास जग्गा प्रकरण र पाठकविरुद्ध घुस काण्डलाई विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त र चार आयुक्त रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। हाल प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरे, आयुक्तहरू डा. गणेशप्रसाद जोशी र डा. सावित्रा गुरुङ थापा मात्रै कार्यरत छन्। दुई आयुक्तको पद लामो समयदेखि रिक्त छ।
प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेता पुनः परामर्शमा जुटेका छन्। ओली–देउवा भेटमा संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका विषयमा छलफल भएको विषय कांग्रेस नेता डा। मीनेन्द्र रिजालले सार्वजनिक गरेका थिए।
संवैधानिक आयोगकै रूपमा रहेका राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगको अवस्था त झनै दयनीय छ। २०५८ सालमा स्थापित यी आयोगमा एक जना पनि पदाधिकारी छैनन्। आयोगमा एकरएक अध्यक्ष र चार÷चार सदस्य रहने व्यवस्था छ। दुई निकायमा १० पद नै रिक्त छन्।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्ष बालानन्द पौडेल मात्र छन्। बाँकी चार पदमा नियुक्ति भएको छैन। मुस्लिम आयोगका अध्यक्षमा सलिम मियाँ अन्सारी नियुक्त भएका छन्। चार सदस्यमा नियुक्ति बाँकी छ। राष्ट्रिय समावेशी आयोग अध्यक्षमा शान्तराज सुवेदी र सदस्यमा विष्णुमाया ओझा नियुक्त भएका थिए। अध्यक्ष सुवेदीले राजीनामा दिइसकेका छन्। यो आयोगमा अध्यक्ष र तीन सदस्य पद रिक्त छन्।थारू र मधेसी आयोगमा एक÷एक जना अध्यक्ष मात्र छन्। बाँकी चार÷चार सदस्य पद रिक्त छन्। थारू आयोगका अध्यक्षमा विष्णुप्रसाद चौधरी र मधेसी आयोगका अध्यक्ष मात्रै विजयकुमार दत्त नियुक्त भएका छन्। सबै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले ६ वर्षको हुने व्यवस्था छ। उमेर हद ६५ वर्ष तोकिएको छ।
‘राजनीतिक भागबन्डा गर्नु हुँदैन’
लामो समयदेखि अख्तियारमा दुई आयुक्त पद रिक्त छन्। पाँच जना हुनुपर्ने तीन जना मात्रै छन्। विपक्षी दलको नेतासमेतको सहमतिमा चाँडो नियुक्ति गर्नुपर्छ। अहिले जुन व्यक्ति नियुक्त हुन्छन्, तिनै व्यक्ति सम्भवतः केही समयपछि प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुन्छन्। लामो समयदेखि आयुक्त नियुक्त नहुँदा अख्तियारप्रतिको विश्वास घट्दै जान्छ। जनशक्तिबिना काम गर्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ।
राम्रो मान्छे नियुक्त हुनुपर्छ। अख्तियारलगायत संवैधानिक निकायको नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा गरिनु हुँदैन। व्यक्तिका क्षमता, नैतिकता, साहसको मूल्यांकनका आधारमा गर्नुपर्छ। उसले कहाँ, कसरी, कुन अवस्थामा, कोसँग के काम गर्‍यो, के प्राप्ति भयो, के विवाद बन्यो, जसमा उसको के भूमिका थियो वा थिएन। उसका पढाइदेखि काम गर्दासम्मका इतिहास के थियो भन्ने यावत् कुराको प्रोफाइलको उचित मूल्यांकन हुन आवश्यक छ। यस्तो मूल्यांकनमा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिका हकमा आम सार्वजनिक अवधारणा पनि महत्वपूर्ण हुन्छन्। यो लुकाएर पनि लुक्दैन। यी कुरालाई पृष्ठभूमिमा राखेरै क्लिन व्यक्तिको चयन हुन आवश्यक छ। आयुक्तमा एक जना कानुनी क्षेत्रको हुनु पर्छ। पत्रकार सुरेन्द्र काप्mलले आजको अन्नपूर्णपोष्टमा खवर लेखेका छन् ।